पूर्ण बजेट कि पूरक ? - Karobar National Economic Daily
पूर्ण बजेट कि पूरक ?
query_builderMay 23, 2017 10:51 AM supervisor_account visibility379
जेठ १५ मा बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको सरकारले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । सरकार परिवर्तनको तयारी र स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण बजेट नै नआउने हो कि भन्ने आशंकाका बीचमा संविधानमा तोकिएकै मितिमा बजेट आउने निश्चय नै सकारात्मक हो ।
राजनीतिक कारणले बजेटको मिति सारेर संविधानको मर्म र भावनामाथि राजनीतिक दलहरूले कुठाराघात गर्लान् कि भन्ने आशंकाको अन्त्य भएको छ । समयमै बजेट नआउने आशंकाका कारण यस वर्ष सरकारले राम्रो तयारी नगरेका कारण कतै कमजोर बजेट आउँछ कि भन्ने आशंका भने स्वाभाविक नै हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले नै बजेट कस्तो आउनेछ भनेर एक हदसम्म संकेत दिनेछ । बजेट आउँदो आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमान मात्र नभई सरकारको अर्थ–राजनीतिक दस्तावेजसमेत हो । अर्कातर्फ मुलुकको अर्थतन्त्र आगामी आर्थिक वर्षमा कुन गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने पनि बजेटले नै निर्धारण गर्नेछ ।
साउनदेखि सुरु हुने बजेट जेठ १५ मै सार्वजनिकीकरण गर्दा यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले पनि तयारीको मौका पाउँछन् र सोहीअनुसार आफ्नो योजना बनाउन सक्छन् । त्यसैले डेढ महिना पहिल्यै बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रचलनले तत्काल कुनै प्रभाव परेजस्तो नदेखिए पनि दीर्घकालमा भने सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ ।
यतिबेला पनि बजेटका सम्बन्धमा केही अन्योल र भ्रम बाँकी नै छन् । सरकारी तहबाटै कामचलाउ बजेट आउने बताइएको छ, तर यसरी प्रचार गरिएजस्तो कामचलाउ बजेट मात्रै आउने हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
संविधानमा कुनै व्यवस्था नै नभएको कामचलाउ बजेट कुनै पनि सरकारले ल्याउन सक्दैन भने बजेट ल्याउनुअगावै पूरक बजेटको परिकल्पना गरिनु आफैंमा अस्वाभाविक मात्र नभई बजेटलाई कर्मकाण्डी मात्रै बनाउने प्रयास हो ।
यसर्थ, सरकारले बिनासंकोच पूर्ण बजेट नै संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । पूर्ण बजेटका लागि निर्वाचन आचारसंहिताले रोक्दैन । निर्वाचन आयोगले नै यस विषयमा प्रस्ट पारिसकेकाले सरकारले खुट्टा कमाउनुपर्ने अवस्था छैन ।
यस वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सीमा सरकारलाई दिएको छ । सरकारले यही सीमाभित्र रहेरै बजेट ल्याउनुपर्छ भने संविधानतः संघीय मोडलको बजेट ल्याउनैपर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो चरणमा भइसकेको र दोस्रो चरणमा हुने क्रममा रहेकाले यी तहका लागि ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यसले विगतको बजेटभन्दा यसै वर्ष क्रमभंगताको अवस्था सिर्जना गर्ने भएकाले आचारसंहिता उल्लंघनका रूपमा हेरिनु हुँदैन ।
अर्कातर्फ निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने नयाँ कार्यक्रमहरू समावेश नगर्न आयोगले निर्देशन नै दिए पनि आधारभूत आवश्यकताका र दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार पार्ने कार्यक्रममा कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
बजेट राजनीतिक सहमतिमा ल्याउने विषय नै होइन । यो त सत्तारूढ दलहरूको अर्थ–राजनीतिक दस्तावेज भएकाले सत्तामा रहेका दलहरूबीच भने यसका लागि सहमति हुनैपर्छ । तर, संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दललाई सन्तुष्ट बनाएर बजेट ल्याउनुपर्छ भनिनु गैरराजनीतिक चरित्र मात्रै हो ।
यसैले अहिल्यै कामचलाउ बजेटको चर्चा चलाएर अथवा पूरक बजेटको परिकल्पना गरेर बजेट ल्याइनु संविधानको भावना र मर्मविपरीत हो । सरकारले त्यो गम्भीर भूल गर्नु हुँदैन ।
निर्वाचन बजेट स्थानीय तहको निर्वाचन